Etu iji tụnyere mgbanwe na faịlụ CAD - Geofumadas
Tụlee mgbanwe ahụ mere ka a CAD file
June, 2017 cadastre, Microstation-Bentley
Ihe dị oke mkpa bụ inwe ike ịmata mgbanwe ndị mere na maapụ ma ọ bụ atụmatụ, ma e jiri ya tụnyere dịka ọ dị tupu edezi ya ma ọ bụ dịka ọrụ oge, na faịlụ CAD dịka DXF, DGN na DWG. Faịlụ DGN bụ usoro nke Microstation na nke obodo ya. N'adịghị ka ihe na - eme na DWG nke na - agbanwe usoro ya kwa afọ atọ, nke DGN nwere naanị ụzọ abụọ: DGN V7 nke dị maka ụdị 32-bit ruo Microstation J na DGN V8 nke dị kemgbe Microstation V8 ma ga - adịgide n'ike ruo ọtụtụ afọ. .
Na nke a, anyị ga-ahụ otu esi eji Microstation mee ya.
1. Mara mgbanwe mgbanwe nke faịlụ CAD
A nakweere arụmọrụ a n'ihe banyere Honduras Cadastre, laghachi na 2004, mgbe nhọrọ nke ịga na nchekwa data gbasara mbara igwe abụghị ihe dị nso. Maka nke a, ekpebiri iji ụdị Microstation akụkọ ihe mere eme, iji chekwaa mgbanwe ọ bụla emere na eserese.
Ya mere, maka afọ 10 faịlụ CAD na-echekwa azụmahịa azụmahịa ọ bụla, a na-edepụta ya dị ka a hụrụ na foto na-esonụ. Usoro ahụ na-echekwa nọmba mbipute, ụbọchị, onye ọrụ, na nkọwa nke mgbanwe ahụ; Nke a bụ ezigbo ọrụ Microstation nke nwere kemgbe ụdị ya bụ V8 2004. A gbakwunyere ga-amanye site na VBA nke mere ka okike nke nsụgharị ahụ mgbe ịmepe mmezi ahụ na njedebe nke azụmahịa ahụ. Emere njikwa faili site na iji ProjectWise, iji gbochie ndị ọrụ abụọ iji ya n'otu oge.
N'agbanyeghị etu esi arụ ọrụ n'oge ochie, faịlụ ahụ na-enweghị akụkọ ihe mere eme arụ ọrụ nyere ohere ịhụ mgbanwe na agba; Maapụ dị n'aka ekpe bụ nsụgharị gbanwere, mana mgbe ị na-ahọrọ azụmahịa ị nwere ike ịhụ na agba ihe ewepụrụ (ihe onwunwe 2015), ihe dị ọhụrụ (ihe onwunwe 433,435,436) na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihe gbanwere ma ọ bụghị gbanwere. Ọ bụ ezie na agba nwere ike ịhazi, ihe dị mkpa bụ na mgbanwe ahụ metụtara azụmahịa na akụkọ ihe mere eme nke nwere ike gbanwee.
Hụ mgbanwe ole maapụ a nwere. Dabere na ebe akụkọ akụkọ ihe mere eme, mmezi 127 nke mpaghara ahụ tara ahụhụ kwuru etu usoro dabara adaba wee gaa n'ihu, karịa ihe niile enwere m obi ụtọ ịhụ ndị ọrụ ọ na-atọ m ụtọ ịga hụ egwuregwu nke otu mba: Sandra, Wilson, Josué , Rossy, el Chamaco ... nwere ike ma m ga-adọka. 😉
Ọ bụ ezie na ọ mere ka anyị chịa ọchị mgbe na 2013 anyị kpebiri ịkwaga na Oracle Spatial, anyị hụkwara ya dị ka ọrụ archaic; anyị enweghị ike ịnabata ya, nke m kwenyesiri ike na mba nke otu ọnọdụ ebe e kpebiri ịchekwa faịlụ dị iche maka mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ na echeghị akụkọ ihe mere eme. Ihe ịma aka ọhụrụ a bụ naanị iche echiche otu esi weghachite site na VBA na akụkọ ihe mere eme metụtara azụmahịa ma gbanwee n'ime ihe eji eme ihe nke nchekwa data gbasara ohere.
2. Ejiri faịlụ CAD abụọ
Ugbu a, ọ bụrụ na echeghị njikwa akụkọ ihe mere eme, na ihe ịchọrọ bụ iji tụnyere ụdị ochie nke atụmatụ cadastral megide ihe gbanwere ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị. Ma ọ bụ atụmatụ abụọ nke ndị ọrụ dị iche iche gbanwere, iche iche.
Iji mee nke a, ndị enyi nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ala ahụ enyela m ngwa ọrụ bara ezigbo uru nke a na-akpọ dgnCompare, nke juru m anya. Naanị faịlụ abụọ ahụ ka a na-akpọ, ọ na-agbakwa ntụnyere n'etiti eziokwu abụọ ahụ.
Nwere ike ọ bụghị naanị tụnyere faịlụ megide otu ọzọ, mana megide ọtụtụ; site na mkpesa na ngosi ihe ngosi nke ihe ndi agbakwunyere, kpochapu, obuna ndi nwere obere mgbanwe dika agba ma obu uzo. O doro anya na ntụzịaka ntuziaka ga-ewe ọtụtụ awa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụbọchị dabere na ọnụọgụ nke mgbanwe. Dabere na ngwa injinia ị na-arụ ọrụ na oge ole ị nwere ike ịchekwa, dgnCompare bara ezigbo uru maka ịrụ ọrụ ahụ na obere nkeji.
Ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị ịhụ ngosipụta nke otu esi arụ ọrụ dgnCompare na otu esi enweta ya, hapụ gị n'ụdị na-esonụ, onye ọkachamara ga-akpọtụrụ gị.
Previous Post«Previous ArcGIS - Akwụkwọ Foto
Next Post Nzọụkwụ n'ịwa a map iji dronesNext »